Gabdho ka baqay Gudniinka Fircooniga oo diiday iney guryaha ka baxaan.. - Hablaha Media Network
Gabdho ka baqay Gudniinka Fircooniga oo diiday iney guryaha ka baxaan..
HMN:- Boqolaal gabdhood oo Kenyan ah ayaa diidan in ay ka tagaan iskuullo iyo kiniisado ku yaalla gobolka Pokot ee galbeedka Kenya, iyaga oo ka baqaya in loo gudo habka gudniinka fircooniga ah loo yaqaanno.
Inkastoo ganaaxyo adag lagala kulmo fulinta gudniinka fircooniga ah tan iyo markii la mamnuucay sanadkii 2012-kii, hadana meelo badaan ayuu ka sii socdaa gudniinkaasi.
Goobo badan oo dalka Kenya ka mid ah ayaa fasaxyada bisha 12 la gudaa gabdho iyo wiilal badan.
Maamuleyaasha iskuuladaas ayaa la amray in ay gabdhaha sii siiyaan hoy iyo cunto ilaa iyo inta iskuulka laga billaabayo si aan iyaga oo yaryar loo guursanin ama loogu qasbin gudniinka Fircooniga ah.
Ardayda iskuulka gabdhaha ee Chepnyal Girls school ayaa heeso qaadaya iyaga oo waalidkood ugu baaqaya in ay joojiyaan gudniinka fircooniga ah ayna u madaxbaneeyaan rabitaan kooda.
Gudoomiyaha gobolka Brian Njeru ayaa qiray in ay sannado qaadan doonto in la cirib tiro gudniinka fircooniga ah, gabdho badanna ay wali u nugul yihiin in habkaas loo gudo.
Si kastaba ha ahaatee tan iyo markii gudniinka fircooniga ah la mamnuucay waxaa sare u kacay gabdha iska diiwaan galiya dugsiyada hoose iyo kuwa sare.